Avoahay ny gadra politika rehetra, hampodio ireo sesin-tany hoy i Fetison Rakoto Andrianirina ! – MyDago.com aime Madagascar
Avoahay ny gadra politika rehetra, hampodio ireo sesin-tany hoy i Fetison Rakoto Andrianirina !
Comite Fetison Rakoto Andrianirina
Nitafa tamin’ny mpanao gazety tetsy amin’ny La Rotonde Besarety ny Komity firaisankina hoan’ireo olona voan’ny tsindry hazo lena, notarihan’ny Fetison Rakoto Andrianirina.
Nanao vaky bantsilana ny fahantrana mahazo ny Malagasy ny tenany : Tsy takona afenina toy ny tafika ao andrefan-tanana ny zava-misy iainan’ny Malagasy ankehitriny. « Mihamahantra ny vahoaka, tsy tambo isaina ireo very asa, mitombo isa ireo matory eny an-dalana, tsy araka intsony ny hofan-trano, tsy vitsy ireo mandry fotsy, miakatra ny vidim-piainana, maro ny tsy afa-mampiana-janaka, tsy zarizary ny fandoavana ny tambin-karaman’ireo mikely soroka hampianatra sy hitaiza ny zanaky ny Malagasy, tsy zarizary ny asan’ireo tantsaha, mihena ny vokatra, mirongatra ny asan-jiolahy : fandrombana etsy sy eroa » hoy ihany ity filoha mpitarika ny Komity ity.
Nametra-panontaniana mihitsy moa izy ny hoe : « tena izany ve no fanovana notakiana teto? »Very hevitra toa valala voatango ny Malagasy » hoy ingahy Fetison. Ampanantenaina fiovana nefa tsy ahitana taratra an’izany ny zava-misy iainany. Ka sao dia ny « nantenain-kanirina no vao mainka ampivandravandra » hoy isika Malagasy.
Noho izany hoy izy dia aoka hisy ny fitoniana ara-politika, miantoka izany fitoniana izany ny : famoahana ny gadra politika rehetra, firosoana amin’ny fampihavanana ny firenena, fampodiana ireo nanao sesin-tany tsy fidiny ny tenany. hoy hatrany ny fanambarany.Samy nampaneno lakolosy fanairana avokoa ireo ireo mahatsiaro ho tompon’andraikitra eto amin’ny firenena, hatreto anefa toa rano araraka amin’ny lamosin-gisa izany, andrasana indray ihany koa ny mety ho hevitry ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana rahampitso etsy Antsahamanitra.
Guy Rivo Randrianarisoa, Marc Ravalomanana, Benja
Avoahay ny gadra politika vao midinika hoy i Lalatiana Ravololomanana !
Aza alevim-belona ny gadra politika !
Auteur Solo RazafyPublié le 25 février 2011 25 février 2011 Catégories Malagasy, Négos, PolitiqueÉtiquettes Fetison Rakoto Andrianirina, Lalatiana Ravololomanana
Précédent Article précédent : Fanambaran’ny ambasady amerikana momba ny rivo-doza Bingiza
Suivant Article suivant : Video – Ravalomanana niantso mivantana teny amin’ny Magro 25/02/2011